Wasaaradda Waxbarashada oo amartay in dalka laga ceyriyo Wakiilka Hay’adda Care ee Somaliya (Ogow Sababta)! | HalQaran.com
Home Warar Cusub Wasaaradda Waxbarashada oo amartay in dalka laga ceyriyo Wakiilka Hay’adda Care ee...
Wasaaradda Waxbarashada oo amartay in dalka laga ceyriyo Wakiilka Hay’adda Care ee Somaliya (Ogow Sababta)!
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federalka Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre, ayaa soo saaray warqad uu ku amraayo in Koonfurta & Bartamaha Somaliya laga eryo madaxa Hay’adda Care.
War qoraal ah oo ka soo baxay Wasiir Goodax oo ku qoran Luuqada English-ka ayaa uu ku sheegay madaxa Hay’adaasi inuu ka soo horjeestay fulinta Siyaasadda dowladda, sidaasi awgeedna uusan wada shaqeyn wanaagsan la laheyn Wasaaradda Waxbarashada.
Imaan Cabdullaahi ayey dowladda federaalka ah ku eedeysay inuu sameeyey meel ka dhac ku aadan siyaasadaha waxbarasho ee Muqdisho, isla markaana uu abuuray qalqalgelin iyo kalsooni darro dhexmarta dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada oo dhinac ah iyo dowladda federaalka ah iyo deeq bixiyeyaasha oo dhanka kale ah.
Hay’adaha dowladda ayaa lagu amray in ay fuliyaan Amarka dalka looga ceyrinaayo Iman Cabdulqadir Madaxa Hay’addaha Care ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Warqadan ka soo baxday Xafiiska Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya ayaan wali jirin cid ka jawaabtay oo dhanka Hay’adda Care ka tirsan.
Wakiilka Hay'adda Care